Guddoomiyaha KDQ oo ku Gacan-saydhay Baadhis Madaxweyne Muuse Biixi galiyey Komishanka | Somaliland Post
Home News Guddoomiyaha KDQ oo ku Gacan-saydhay Baadhis Madaxweyne Muuse Biixi galiyey Komishanka
Guddoomiyaha KDQ oo ku Gacan-saydhay Baadhis Madaxweyne Muuse Biixi galiyey Komishanka
Hargeysa (SLpost)- Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee Somaliland marwo Kaltuun Sheekh Xasan Cabdi, ayaa ku gacan-saydhay guddi Madaxweyne Muuse Biixi u xilsaaray baadhista khilaaf maamul iyo maaliyadeed oo ka dhex jira Guddida Doorashada.
Marwo Kaltuun oo dhawaan loo doortay Xilka kaddib markii ay xubnaha guddigu xilka ka qaadeen guddoomiyihii hore Cabdirashiid Riyo-raac, waxa ay si adag uga hortimi guddida baadhiseed ee Madaxweyne Biixi u magacaabay Komishanka Doorashooyinka oo ay ku tiirsanaantay inaanay aan dhexdhexaad ahayn.
“Waxaannu diyaar u nahay in la soo diro guddi baadhiseed oo madaxbannaan oo baadha arrimaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka, waxana aannu rumaysanahay in guddida hadda la soo magacaabay aanay ahayn guddi dhexdhexaad ah,” ayey tidhi Kaltuun Sheekh Xasan oo maanta la hadashay warbaahinta.
Waxa ay ku doodday in aanay jirin wax dhibaato ah oo u dhexaysa xubnaha Guddida Doorashooyinka. “Ma jirto wax dhib ah oo ka dhacay Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Waxa keliya ee ay sameeyeen isbeddel ku yimi hoggaanka, iyada oo la beddelay guddoomiyihii hore, guddoomiye cusubna loo doortay anigoo ah Kaltuun Sh. Xasan, 27kii April 2022,” Sidaas ayey tidhi Marwo Kaltuun.
Guddoomiye Kaltuun ayaa sidoo kale sheegtay in aannu jirin khilaaf maaliyadeed oo u dhexeeya xubnaha Komishanka, sida ku xusan qoraal Madaxweynuhu ku magacaabay guddida baadhista 10-kii bishan May.
“Doorashadayda waxa loo maray hab sharci ah oo la mid ah kii markii horeba lagu doortay guddoomiyihii hore sida uu dhigayo xeerka doorashooyinka. Ma jirin, mana dhicin marna wax khilaaf maaliyadeed ah oo xubnaha Komishanka Doorashooyinku codsadeen in la baadho, waxase jiray khilaaf maamul oo soo jireen ah oo uu abuuray guddoomiyihii hore,” ayey tidhi Kaltuun.
Waxa Marwo Kaltuun ku eedaysay guddoomiyihii hore ee Komishanka Cabdirashiid Maxamuud Cali (Riyo-raac) inuu isagu abuuray khilaafka, kadib markii siday sheegtay xilka looga qaaday musuqmaasuq ay ku eedaysay.
Dabayaaqadii bishii hore, ayaa kulan ay yeesheen 5 ka mid ah toddobada xubnood Komishanka waxa ay xilkii Guddoomiyaha kaga qaadeen Guddoomiyihii hore Cabdirashiid Riyo-raac, iyagoo ku beddelay Marwo Kaltuun.
Guddoomiyihii hore ee Komishanka ayaa tallaabadaas si adag uga horyimi, isagoo madaxweynaha ka dalbaday inuu guddi-baadhiseed u xil-saaro musuq-maasuq uu sheegay inuu ka jiro komishanka.